YEYINTNGE(CANADA): Monday, October 20
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/20/20080အကြံပြုခြင်း
တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 20 2008 17:35 - မြန်မာစံတော်ချိန်
`စံခရဘူရီ` က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ထိုင်းဘက်မှ မြို့ငယ်လေး ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်စည်း၏ မြန်မာဘက်တွင်မူ `ဘုရားသုံးဆူ` ရှိသည်။ ဘုရားသုံးဆူက ၁၉၉၀ ခုနှစ်အထိ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ဒေသဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟိုစဉ်က ဘုရားသုံးဆူတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ရှိသည်။ KNU တပ်မဟာ ၆ ရှိသည်။ ပြီးလျှင် ….. ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကျောင်းသားတပ်ရင်းများ ရှိကြသည်။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ဘုရားသုံးဆူကျပြီးနောက် …. ဘုရားသုံးဆူအား စစ်အုပ်စုမှ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်အတွင်းရှိ တိုက်နယ်မြို့ငယ်လေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့၏။
`စံခရဘူရီ` မြို့အ၀င်လမ်းက အခြားမြို့များနှင့်မတူ။ မြို့အား ၀င်သည်နှင့် `စံခရဘူရီ` သည် ချိုင့်ဝှမ်းအတွင်း ပြားပြားလေးဝပ်နေသည်အား မြင်ရသည်။ တောင်ထိပ်မှ ဆီး၍ မြင်ရသောမြို့ …..။ မြို့ငယ်သည် `ထပ်ခနုံ` ရေကာတာကြီး၏ အနားသတ်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ မြို့အ၀င်တောင်ထိပ်မှ ကြည့်လျှင် …. ရေပြင်ကျယ်နှင့် မြို့ရွာအိမ်ငယ်တို့သည် ထိထိစပ်စပ် ရောရောထွေးထွေး….။ ကားသည် တောင်ပေါ်မှ တောင်အောက်သို့ ဝှေ့ကာ ၀ိုက်ကာ ဆင်းလာသည်။ တောင်အကွေ့တွင် စံခရဘူရီအား မမြင်တွေ့ရ….။ တောင်ကမ်းပါးကြီးသာ တွေ့ရ၏။ မကြာ….။ ကားသည် တဖက်သို့ ကွေ့၍ ၊ ၀ိုက်၍ ဆင်းပြန်၏။ ဤတွင် ရေပြင်ကျယ်နှင့် စံခရဘူရီအား မြင်ရပြန်၏။ ကားသည် မတ်စောက်အကွေ့များမှ …..တဖြည်းဖြည်း ဆင်ခြေလျှောသို့ ….။ ထိုမှ မြေပြန့်…..။ မြေပြန့်လမ်းက ကျယ်သည်။ လမ်း၏ တဖက်တွင် ရေပြင် ….တဖက်တွင်မူ တောင်ယာကုန်းများ….။ လမ်း၏ ဘယ်ဘက်တွင် ပင်မလမ်းအား ဦးခိုက်ထားသည့် လမ်းမသွယ်အား တွေ့ရသည်။ ဆိုင်းပုဒ်ထောင်ထားသဖြင့် ….` ဘုရားသုံးဆူ သို့ ……` ….ဟူသည့်စာအား ဖတ်ရ၏။ ဤလမ်းမသွယ်က ဘုရားသုံးဆူသို့ သွားရာလမ်း….။ ကားသည် မြေပြန်လမ်းမကြီးအတိုင်း စံခရဘူရီမြို့သို့ ၀င်လာ၏။
စံခရဘူရီနှင့် ခလော့ခနီ ဒုက္ခသည်စခန်းက မော်တော်ကားလမ်း ပေါက်သည်။ စံခရဘူရီမှ ဟွေ့မလှိုင်းရွာငယ်အထိကမူ ကတ္တရာခင်းလမ်း ဖြစ်သည်။ ဟွေ့မလှိုင်း လွန်သည်နှင့် လမ်းက မြေနီလမ်း …..။ လမ်းကြမ်း၏။ `ဖိုးဝီး` များသာ သွားကြသည်။ ခလော့ခနီဒုက္ခသည်သို့ ရောက်ခါနီး တက်ရသည့် တောင်က မြင့်သည်။ မတ်စောက်သည်။ ယှက်အားကောင်းသည့် ကားများမှ တက်ရသည်။ ကျနော်တို့ စံခရဘူရီတွင် ကားပြောင်း၍ စီးကြသည်။ စံခရဘူရီနှင့် ခလော့ခနီက တနာရီခရီးခန့်သာ ရှိ၍ ခလော့ခနီသို့ အရောက်သွား၍ ညအိပ်ရန် စီစဉ်လိုက်ကြ၏။ ခလော့ခနီဒုက္ခသည်စခန်းသို့ မရောက်မီ ထိုင်း နယ်ခြားဂိတ်တခုကို တွေ့ရသည်။ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်လား …. ထိုင်းပြည်သူ့စစ်လားဟူ၍ မခွဲခြားတတ် ပြောက်ကျား စစ်ယူနီဖောင်းများအား ၀တ်ထားကြ၏။ ဂိတ်စခန်း၏ ဘေးတွင်မူ နယ်ခြားမှတ်တိုင် စိုက်ထား၏။ ဤနေရာတွင် နယ်ခြားစည်းက သဘာဝ အတားအဆီးမရှိ …..။ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်က ကျနော်တို့ ကားအား ခဏစစ်ဆေးပြီး သွားခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ဂိတ်စခန်းအလွန်လမ်း၏ လက်ယာဘက်တွင် ဒုက္ခသည် အိမ်ငယ်များကို ကားလမ်းနှင့် ယှဉ်၍ ဆောက်ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကရင်ဒုက္ခသည်များ …..။ ခလော့ခနီ ဒုက္ခသည်စခန်း မဟုတ်သေး….။ `သောပ` ဒုက္ခသည်စခန်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေနည်းသည်။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်မှ အသစ်ထပ်ဖွင့်သည့် ဒုက္ခသည်စခန်း ဖြစ်သည်။
`သောပ` ဒုက္ခသည် စခန်းလွန်သည်နှင့် ဆန်ဂိုဒေါင်ကြီး ၂ လုံးကို တွေ့ရ၏။ ဂိုဒေါင်များအလွန် လမ်း၏ လက်ဝဲဘက်တွင်မူ …. ခလော့ခနီ ဒုက္ခသည်စခန်း …..။ ခလော့ခနီ ဒုက္ခသည်စခန်းက တောင်ကြောနှစ်ခုအကြား လျှိုပြန့်ငယ်အတွင်း ဆောက်ထားသည့် …. ရွာတန်းရှည်ကြီး ဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်စခန်း တည်ထားသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ အခြေကျနေပြီ….။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ဗီဒီယိုရုံတို့နှင့် စည်ကား၏။ ဈေးဆိုင်များမှာလည်း မြန်မာပစ္စည်း၊ ထိုင်းပစ္စည်း အစုံရသည်။ ခလော့ခနီ ဒုက္ခသည်စခန်းက မိန်းလမ်းမကြီးတခုသာ ရှိသည်။ အိမ်များက လမ်းမကြီးအား ခွ၍… ညှပ်၍ ဆောက်ထားကြသည်။ အချို့က တောင်စောင်းတွင် မြေညှိ၍ ဆောက်ထားကြသည်။
ကျနော်တို့ စီးလာသောကားသည် ဒုက္ခသည် လမ်းမကြီးအတိုင်း ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပင် မောင်းလာ၏။ ကျနော်တို့ တည်းမည့်နေရာက `ဘလက်ဒွန်ဖိုက်` တွင် ရှိသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ မြို့နယ်ရုံးတွင် ဖြစ်သည်။ ခလော့ခနီနှင့် ဘလက်ဒွန်ဖိုက်က တဆက်တည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘလက်ဒွန်ဖိုက်က မြန်မာပြည်အတွင်းဘက် ပိုကျ၏။
ကျနော်တို့ ဘလက်ဒွန်ဖိုက်ရှိ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၏ မြို့နယ်ရုံးလေးသို့ ရောက်တော့ ….. နေညိုပြီ။ တောင်ကြားချိုင့်ဝှမ်းအတွင်း ဖြစ်၍လားမသိ ….။ နေညိုသည်နှင့် အေးစိမ့်မှုက သိပ့်သည်းလာသည်။ ရေပင် မချိုးနိုင်ကြတော့…..။ ကိုယ်လက်ဆေးကြောပြီး ညစာ စားကြ၏။ ကျနော့်အဖို့ …. မျောက်ချီးခါးဟင်းကို ပထမဦးဆုံး စားဖူးခြင်းဖြစ်သည်။
ချီးခါးဆိုသော်လည်း သက်ရုံမျှသာ ….။ လက်ဖက်နံ့ သင်းသင်းနှင့် မျောက်ချီးခါးဟင်းက ….. အသားတမျိုးမျိုးအား လက်ဖက်နှယ်၍ ချက်ထားသည်နှင့်ပင် တူတော့၏။
မနက်ဖြန် ဆက်ရမည့်ခရီးက ခြေလျင်ခရီး ….။ တောင်အတက်အဆင်း ရှိသည်။ ၃ ရက်ခန့် သွားရမည်ဟု ဆိုသည်။ ညဉ့်နက်သည်နှင့် အအေးက စိမ့်၍ ပိုအေးလာသည်။
တောင်က မြင့်မား၍ မဟုတ်။ မတ်စောက်သဖြင့် တက်ရသည်မှာ ခက်ခဲ၏။ လမ်းက လူတကိုယ်စာ သွားသာရုံမျှသာ။ မိုးရွာထားသည့်အတွက် မြေလမ်းက ချော၍နေသည်။ လှေကား ထောင်တက်ရသလို မတ်စောက်လွန်းလှသည်။ လမ်းဘေးရှိ ၀ါးပင်များအား လက်မလွှတ်ရဲ။ ဆွဲပြီး တက်ရသည်။ ကျော၌ပိုးထားသော ကျောပိုးအိတ်၏ အလေးချိန်ကြောင့် ပြန်၍ လန်ကျမသွားအောင် သတိထားတက်နေရသည်။ မိုးက ဖွဲဖွဲရွာလာပြန်သည်။ မိုးစက်တို့က ချွေးတို့နှင့် ရောသွားသည်။ ကျောပိုးအိတ်နှင့် ကျောပြင်ထိနေသည့် နေရာ၌ ချွေးတုိ့သည် စိုရွှဲ၍ အေးစက်နေသည်။ စောင်ပါးတထည်၊ ပုခက်တလုံး၊ အ၀တ်အစား အပိုနှစ်စုံ၊ ဆေးဝါးအချို့နှင့် စာအုပ်စာတမ်း အနည်းငယ်သာ ပါသော ကျောပိုးအိတ်သည် ပခုံးပေါ်၌ လွယ်ထားရသည်မှာ လေးလွန်းလှသည်ဟု ထင်ရသည်။ ပစ်ချလိုက်ချင်၏။ အသက်ရှူရသည်မှာ မ၀။ လေတွေ နည်းကုန်ပြီဟု ထင်မိသည်။ နှလုံးခုန်သံကို ကြားရသည်မှာ မီးရထားတစီး ရင်ဘတ်ပေါ် ခုတ်မောင်းနေသလားဟု ထင်မိသည်။ အဆုတ်သည် ညှစ်ရလွန်း၍ ပေါက်ကွဲထွက် သွားမည်ကိုပင် စိုးရိမ်မိသည်။ ပါးစပ်ကို "ဟ" ပြီး အသက်ရှုကြည့်၏။ နည်းနည်းသက်သာသလို ထင်ရသည်။
၀ါးရုံပင်ကို ကိုင်ပြီး အနောက်အောက်ဘက်သို့ လှည့်ကြည့်တော့ ----- ဦးဗိုလ် (ဦးဗိုလ်သောင်း၊ အန်အယ်လ်ဒီ ယင်းမားပင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်) သည် ခါးစောင်းခန့်ရှိသော လမ်းဘေးရှိ သစ်ငုတ်တိုကို မှီပြီး ပါးစပ်ကို "ဟ" ၍ အသက်ကို ရှူနေသည်။ ချွေးတို့က ရွှဲနစ်နေသည်။ ကျနော့်အား ခေါင်းခါပြ၏။ မလွယ်ဘူး ဆိုသည့်သဘော----။ ကျောပိုးအိတ်အား နည်းနည်း နေရာရွှေ့ပြင်ပြီး ဆက်တက်၏။ လမ်းက ပိုချောလာသည်။ ခြေညှပ်ဖိနပ်ဖြင့် ခြေကုတ်မမြဲ။ ချောနေသည်။ ခြေညှပ်ဖိနပ်အား ချွှတ်ပြီး လက်ကောက်ဝတ်တွင် စွတ်ထားလိုက်သည်။ ခြေမနှင့် မြေအား ကုတ်၍၊ ကုတ်၍ တက်မှ တက်၍ရသည်။ လက်ကလည်း လမ်းဘေးအပင်များကို လက်မလွှတ်ရဲ။ တပင်ပြီး တပင် ဆွဲပြီး တက်ရသည်။ မလွယ် -----။
တောင်ကြောပေါ်သို့ ရောက်တော့ ကျနော်တို့ တက်ခဲ့သည့် လူသွားလမ်းသည် ကားလမ်းမကြီးနှင့် ပေါင်းသွားသည်။ ကားလမ်းမ ဆိုသော်လည်း ကျောက်ခင်းလမ်းမဟုတ်။ မြေမာလမ်းပင်ဖြစ်သည်။ စံခရဘူရီ၊ ခလော့ခနီ၊ ရေးကားလမ်းဖြစ်သည်။ မိုးအခါတွင် သုံးမရ။ နွေနှင့် ဆောင်းတွင်သာ အသုံးပြု၍ရသော ကားလမ်းဖြစ်သည်။ တောင်ကြောပေါ်မှ ကြည့်လျှင် ကျနော်တို့ မနက်ကထွက်ခဲ့သည့် `ဘလက်ဒွန်ဖိုက်` ရွာလေးအကို တွေ့ရသည်။ ခလော့ခနီနှင့် ဘလက်ဒွန်ဖိုက် ဒုက္ခသည်စခန်းက တောင်ကြောနှစ်ခု၏ အကြားတွင် တည်ထားသော ရွာတန်းရှည်ရွာများဖြစ်သည်။ သက်ကယ်မိုး သဲပွတ်ကာ သဲပွတ်ခင်း ဒုက္ခသည် အိမ်ကလေးများက ကားလမ်းအား ခွပြီး အစီအရီ ပြွတ်သိပ်၍ ဆောက်ထားကြသည်။ အချို့က တောင်စောင်း မြေပြန့်ပြန့်တွင် ကပ်၍ ဆောက်ထားကြသည်။
ဤနေရာတွင်မူ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ပထ၀ီသတ်မှတ်ချက် သိသိသာသာဖြင့် စည်းခြားမထား။ မြ၀တီ-မဲဆောက်ကဲ့သို့ သောင်းရင်းမြစ်က နယ်စမ်မျဉ်းအဖြစ် ရှိမနေ။ မြေကြောတစပ်တည်း ဖြစ်နေသည်။ ခလော့ခနီဒုက္ခသည် စခန်း၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင်မူ တောင်တန်း ညိုညိုစိမ်းစိမ်းများကို တွေ့ရသည်။ ထိုနေရာတွင် ဘုရားသုံးဆူရှိသည်။ ခလော့ခနီဒုက္ခသည်စခန်းမှ လမ်းလျှောက်သွားလျှင် ဘုရားသုံးဆူသည် နာရီဝက်ခရီးခန့်သာရှိမည်။ ယခင်က ဘုရားသုံးဆူသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ကရင့် အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် တပ်ရင်းများ ခြေကုတ်ထိုင်ခဲ့သည့် နယ်စပ်စခန်းတခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ၈ လေးလုံး တနှစ်ပြည့် အခမ်းအနားအား ဘုရားသုံးဆူစခန်း၌ ကျင်းပသည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ နိုင်ဆိတ်နို့ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ပြီး စကားပြောသည်။ စကားပြောစင်မြင့်ပေါ်မှာပင် စကားပြောရင်း နိုင်ဆိတ်နို့ နှလုံးသွေးကြောရပ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့၏။ မှတ်မှတ်ရရပင်။ ယခုမူ ဘုရားသုံးဆူစခန်းအား န၀တ စစ်တပ်မှ သိမ်းယူထားခဲ့ပြီး မြို့နယ်တခုအဖြစ် နအဖ၏ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင် ရောက်နေလေပြီ။
ကျနော်တို့ ခဏနားပြီး ဆက်တက်လာခဲ့ကြသည်။ လမ်းက ကားလမ်းဖြစ်၍ လျှောက်ရသည်မှာ သက်သက်သာသာ ရှိသည်။ ဖိနပ်စီး၍ ပြန်လျှောက်လို့ ရပြီ။ လမ်းကျယ်၍ မြေမာကို ရွေးပြီး ခြေချလို့ရသည်။ တက်လျှင်လည်း ဖြေးဖြေးချင်း မော့တက်သွားသည်။ ဆင်းလျှင်လည်း ဆင်ခြေလျော ----- ။ ပြေပြေပင် ---။ တောင်ပေါ်ကားလမ်းဖြစ်၍ တောင်အား ပတ်ဖောက်ထားသည်။ လမ်း၏ လက်ယာဘက်တွင်က တောင်ကမ်းပါးအား ဖြိုချထားသည့် မြေသားများကို တွေ့ရသည်။ အရောင်က နီညိုညို -----။
၀ါးရုံကြီးများက ကြီးမားလှသည်။ ၀ါးပင်များက ရှည်လည်းရှည်သည်။ ပေ ၁၀၀-၁၅၀ ထိပင် ရှိမည်။ ကွေး၍ ညွှတ်နေကြသည်။ တရုံနှင့် တရုံ ယှက်ထိုးနေကြသည်။ လမ်း၏ လက်ဝဲဘက်တွင်မူ တောင်စောင်း ချောက်ကမ်းပါး -----။ ကမ်းပါးက နက်ရှိုင်းလှသည်။ စိမ်စိမ်းအုပ်အုပ် သစ်ပင်များနှင့် -----။ အဝေးတွင်မူ တောင်တန်းများက အထက်လိုက်၊ အထက်လိုက် ----။ အချို့က စိမ်းညိုညို --- အချို့က ပြာလဲ့လဲ့----။ မြူလား မီးခိုးလား မသိ။ အူထွက်နေသည်။ ဤတောင်တန်းများက တနင်္သာရီတောင်တန်းများလေလား။ မပြောတတ်။
အရှေ့မှ နွားအုပ်ကြီးတအုပ် တက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်မည့် နွားများ။ နွားအကောင်ရေ ၅၀ ခန့်ရှိမည်။ နွားထီးများက အများစုဖြစ်သည်။ ရေးမှ တက်လာသော နွားများဖြစ်သည်။ အချို့နွားများက ခြေနာ၍ ထော့ကျိုးထော့ကျိုးနှင့် သွားနေကြသည်။ အချို့နွားက သွားရင်းနှင့် နွားထီးအချင်းချင်း မိတ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေသေးသည်။ သားသတ်ရုံသို့ သွားနေရသော သူတို့၏ ခရီးကို မသိကြ။ နွားမောင်းလာသည့် နွားကုန်သည်တဦးအား မေးကြည့်၏။
ကျနော်တို့ ဒီည ချမ်းတိုက်တွင်ပင် ညအိပ်ကြမည်။ ချမ်းတိုက်ရောက်တော့ ညနေ ၆ နာရီခန့်ပင် ရှိမည်။ တနေ့လုံး လျှောက်ထားရသည့်အတွက် ပေါင်တွေက တောင့်နေပြီး၊ ခြေသလုံးကြွက်သားများက တင်းနေသည်။ မိုင် ၃၀ ခရီးကို လျှောက်ခဲ့ရကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်က သက်သေခံနေသည်။
---------------- ပြီးပါပြီ -------------
ကံကောင်းတဲ့အယ်ဒီတာ မနေ့တုန်းက ကြေးမုံသတင်းစာမှာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ မင်းတြားကြီးသန်းရွှေနဲ့ သံအမတ်၂ယောက် တွေ့ဆုံခြင်းသတင်း မျက်နှာဖုံးပြည့်ပါလာပါတယ်။ သံအမတ်တွေနဲ့တဲ့ဟေ့၊ မျက်နှာဖုံးပြည့်ဆိုပါလား၊ ထူးခြားသဟ ထင်ပြီး သွားဖတ်ရင်လည်း ဖတ်ပေါ့။ မဖတ်အားလို့ ဘာတွေရေးထားလဲ အကျဉ်းချုပ်ပြောပြပါ ဆိုရင် သံအမတ် ၂ယောက်ရဲ့ ခန့်အပ်လွှာ လက်ခံတာပါပဲ၊ ပုံကြီးကြီး ၂ပုံ ထည့်ထားတယ် လို့ တကြောင်းတည်း ဆိုရပါမယ်။ ဒါပါပဲ။ တူရကီသံအမတ်ကြီးက အပေါ်ပုံ၊ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးပုံက အောက်ဘက်မှာ။
သံတမန်လောကအတွက်တော့ ဒီမျက်နှာဖုံးက အဓိပ္ပာယ်တမျိုးကို ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယကို နှိပ်ကွပ်လိုက်သလား ဆိုပြီး။ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဘာပွဲညာပွဲတွေမှာ သံအမတ်တွေက အိမ်ရှင်အကြီးအကဲနဲ့ အနီးကပ်၊ ပြီးတော့ ဘယ်ဘက်မှာဆိုလား ညာဘက်ဘက်မှာဆိုလား ထိုင်ခွင့်ရမှ စိတ်ချမ်းသာသတဲ့။ သံအမတ်ဟာ နိုင်ငံတခုကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဒီသံအမတ်ကို ပြုမူပုံကိုကြည့်ရင် သူ့နိုင်ငံအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာကို ပြသပါသတဲ့။
မျက်နှာဖုံးအကြောင်း ပြန်ဆက်ရရင် ကြေးမုံသတင်းစာ အယ်ဒီတာများကတော့ ဒီလိုမျက်နှာဖုံးမျိုးကို ကြိုက်ကြမှာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဖောင်ပိတ်ချိန်နီးတဲ့ ညသန်းခေါင်မှာ အယ်ဒီတာတွေက မျက်နှာဖုံးအတွက် သတင်းရေးဖို့၊ သတင်းရွေးဖို့ အပျင်းကြီးတဲ့နေ့ဆိုရင် ဓာတ်ပုံတွေကို ခပ်ကြီးကြီး ထည့်ခိုင်းလိုက်ကြတာ ထုံးစံပါပဲ။ မျက်နှာဖုံးကို မင်းတြားကြီးရဲ့ သတင်း ၂ပုဒ်၊ ပုံ ၂ ပုံနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် အယ်ဒီတာများ အချိန်ကုန်လူပမ်း သက်သာလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။
၂၄ နာရီအတွင်း ရန်ကုန်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွား
အေးချမ်းမြေ့ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈
စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ ၂ ရက်တွင် ၂၄ နာရီအတွင်း ရန်ကုန်မြို့၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူတဦး သေဆုံးသွားခဲ့ ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိသည်။
စနေနေ့ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၁၅ ရပ်ကွက် ဘောက်ထော် ဘူတာရုံလမ်းနှင့် မိုးကောင်း လမ်းဆုံအနီး၊ တပ်မတော်မှတ်တမ်းရုံးရှေ့ ဘောလုံးကွင်းနားတွင် ဗုံး ၁ လုံးပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရရှိခဲ့ဘဲ သစ်ပင်အသေး ၂ ပင်သာ လဲသွားခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၌မူ “အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားသည့် နေရာ၏ ၁၅ ပေခန့်အကွာ လမ်းဘေးတွင် နောက်ထပ် ချိန်ကိုက်မိုင်းတလုံးကို သိမ်းဆည်းဖော်ထုတ် ရရှိခဲ့သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“ကျနော်ကတော့ ဒီဗုံးပေါက်တာ နအဖ ပဲလို့တောင်ထင်တယ်။ ဖြစ်တာက တကယ့်နေရာ မှတ်တမ်းရုံးရှေ့ကြီး။ လုံခြုံရေး တွေ ဘာမှမတင်းကျပ်ထားဘူး။ ကျနော် မနေ့က မှတ်တမ်းရုံးထဲသွားတာ ဂိတ်မှာစစ်တောင် မစစ်ဘူး” ဟု ဒေသခံတဦးက ပြောပြသည်။
၎င်းဗုံးပေါက်ကွဲပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းတွင် ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်အတွင်း၌ ဗုံးတလုံး ထပ်မံပေါက်ကွဲပြီး ပေါက်ကွဲမှု ကြေင့် လူတဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၎င်းသတင်းကို ရွှေပြည်သာ ရဲစခန်းက အတည်ပြုပြီး စုံစမ်းမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်ဟု ကြားသိရသည်။
ထို့ပြင် စနေနေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၅၅ မိနစ်ခန့်ကလည်း တာချီလိတ်ရဲစခန်းတွင် အလွန် အားမပြင်းသော ဗုံး ၂ လုံးပေါက်ကွဲ ခဲ့ကြောင်း တာချိလိတ် ရဲစခန်းနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝန်းမှ ကြားသိရသည်။
သောကြာနေ့က ရုံးထုတ်ခဲ့သော တရားခံများထဲတွင် ပါဝင်သည့် လက်နက်မှုနှင့် စွဲဆိုခံထားရသော ဝ အမျိုးသား တရားခံ တဦးက အချုပ်ခန်းကို ဖောက်ခွဲပြီး ထွက်ပြေးရန်အကြံအစည်ဖြင့် ယင်းအမှုကို ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ရုံးထုတ်တော့ အဲဒီတရားခံကို လာတွေ့တဲ့သူက သူ့ကို ပဲနို့တကပ်ပေးသွားတယ်။ အဲဒီတရားခံက အဲဒီဘက်မှာ နည်းနည်း ပါဝါရှိတဲ့သူဆိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေက ဘာမှမစစ်ဘဲ လွှတ်ပေးထားတာ။ ပဲနို့ကပ်ထဲမှာ ဗုံးက ပါသွားတာ” ဟု အဆိုပါ တာချီလိတ်ရဲစခန်းနှင့် နီးစပ်သူကဆိုသည်။
စနေမနက်အစောပိုင်းတွင် ၎င်းက ဗုံး ၂ လုံးကို နံရံတွင်ကပ်၍ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဖောက်ခွဲလိုက်သော်လည်း အားအလွန် မပြင်းထန်သောကြောင့် နံရံမှာ ပြိုကျခြင်းမရှိဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အားပြင်းရင်တော့အကုန်ထိမှာပဲ။ ဘေးမှာကလက်နက်တိုက်လေ” ဟု သူကပြောသည်။ ယခုအခါ ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပဲနို့ကပ်ပေးသွားသူကို လိုက်လံရှာဖွေဖော်ထုတ်နေသည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ အောက်တိုဘာလ ၄ လအတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၇ ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလ မှ စတင်ရေတွက်လျင် ၁၂ ကြိမ်ခန့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်းက နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားဘူတာနှင့် ရန်ကုန်ဘူတာကြီးတို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရန်ကုန် ဘူတာကြီးတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အမျိုးသမီး ၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
ဧပြီလအတွင်းကမူ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရရှိပေ။ ဇူလိုင် ၁၄ ရက် နေ့ကလည်း ပဲခူးတိုင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် အနီးတွင် ခရီးသည်တင်ကားတစီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၅ ဦးခန့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လအတွင်းကပင် ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးအနီးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်အစိုးရက လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် မြှင့်တင်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်အေးကို စွပ်စွဲ၍ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရဲချုပ်ခင်ရီက ဦးမြင့်အေးသည် ဇူလိုင်လ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် အဓိကပတ်သက်နေသော ဖောက်ခွဲရေးသမားများကို ပံ့ပိုးခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဦးမြင့်အေးသည် အဖမ်းမခံရမီက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ အတင်းအကျပ်လုပ်အားပေး စေခိုင်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ၎င်း၏ အပေါင်းအပါများနှင့်အတူ စုဆောင်း ဖော်ထုတ်ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းသို့ ပေးပို့နေသူဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရက ဗုံးဖောက်ခွဲသူများကို ဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများမှာ ရပ်တံ့မသွားဘဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျှက်ပင် ရှိနေသေးသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီး မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဗီဒီယိုရုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရာ လူ ၂ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၀ ဦးခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ၎င်းပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရက ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ လက်ချက်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရရှိခဲ့ပေ။
စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဗန္ဓုလ ပန်းခြံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲပြန်ရာ လူ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများအပြင် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း၌ စီအန်ဂျီဓာတ်ငွေ့အိုး ပေါက်ကွဲမှုများလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အောက်တို ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
“ရန်ကုန်မှာ ဗုံးကွဲတာတို့ ကားဂက်စ်အိုးပေါက်တာတို့က ဖက်ရှင်လိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။ လူတွေက အသက်ကို ဖက်နဲ့ ထုပ်ထားရသလိုပဲ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးကပြောသည်။
အပြစ်မရှိဘဲ အဖမ်းခံထားရသည့် သတင်းထောက် အချုပ်မှလွှတ်
လူသတ်မှုသတင်း ရေးသားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းရဲ၏ ခေါ်ယူကြိမ်းမောင်းခြင်းကို ခံရပြီးနောက် မကြာမီ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဖလားဝါးနယူးစ် ဂျာနယ်၏ သတင်းထောက်ချုပ် ကိုစောမြင့်သန်း အား ယမန်နေ့ညနေက ပြန်လွှတ်ပေးလိုက် ကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှ လာသောသတင်းများ အရသိရသည်။
ကိုစောမြင့်သန်းကို တရားမ၀င်အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်မှုပုဒ်မ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် ပုဒ်မနှင့် အစိုးရအကြည်ညိုပျက်အောင် ပြောဆိုမှု စသည့် အနည်းဆုံး ပုဒ်မ ၃ခုနှင့် တရား စွဲဆို ခဲ့ပြီးနောက် တလခွဲကျော်အကြာ တွင်ယခုကဲ့သို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
အမှုမှ တရားသေလွှတ် ပေးလိုက်သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ လာသော သတင်းများအရ သိရပြီး၊ ခံဝန်ချက်ထိုးရခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်မှုမျိုး ရှိမရှိကိုမူ ရှင်းလင်းစွာ မသိရှိရသေးပေ။
စက်တင်ဘာ လနောက်ဆုံးပတ်ထုတ် ဖလားဝါးစ်နယူးစ် ဂျာနယ်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ လင်မယားနှစ်ဦး အသတ်ခံရသည့် သတင်းကို ကိုစောမြင့်သန်းနှင့် အခြားသတင်းထောက်တဦး တို့ကမေးမြန်းကာ ဂျာနယ်တွင် ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ဂျာနယ်ထွက်ရှိပြီး မကြာမီ ရန်ကုန်တိုင်းရဲက ကိုစောမြင့်သန်းအား ခေါ်ယူကာ လူသတ်မှု သတင်းရေးသားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြိမ်းမောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက် သည့် သတင်းကို နာရီပိုင်းအတွင်း ချင်းမိုင်အခြေစိုက် ဧရာဝတီသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့မှုကြောင့် ကိုစောမြင့်သန်းအား ပြည်ပသတင်းဌါနနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲကာ စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ကျောက်တံတားရဲစခန်းက ကိုစောမြင့်သန်း ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် ဆက်သွယ်သည့် အထောက်အထား တစုံတရာမျှ မတွေ့ရှိရသော်လည်း အထက်မှ ညွှန်ကြားချက်အရ အရေးအယူလျင် မဖြစ်သည့် အခြေအနေကြောင့် အရေးယူ ခဲ့ရသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ ဂျာနယ်အသိုင်းအ၀ိုင်း မှကောက်ချက်ချ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ သတင်းထောက်တဦးက …
“ကိုစောမြင့်သန်းက အသားလွတ်ကြီး ခံရတာဆိုတော့ လွှတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာအထောက်အထားမှလည်း မရှိပဲနဲ့ ပို့တဲ့သူကို မဖေါ်နိုင်ရင် ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးဖမ်းတာကတော့ ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး၊ အခုလို လွတ်တယ်လို့ ကြားတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ သတင်းထောက်က သတင်းရေးလို့ အကြိမ်းမောင်းခံရတယ်။ အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာလောကအတွက် မကောင်းပါဘူး။ ရေးသားတဲ့ သတင်းမှားလို့ တရားစွဲခံရတယ် ဆိုတာမျိုးကို နားလည်နိုင်သေးပေမယ့် အခုကိစ္စကတော့ နကိုကတည်းက ဖြစ်ကိုမဖြစ်သင့်တဲ့ ဟာပါ” ဟုပြောဆိုသည်။ (Burmese street vendors preparing for selling Burmese journals & periodicals - file photo, MoeMaKa)
မကြာမီ နှစ်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ် အများအပြား ပေါ်ထွက်လာကာ အမျိုးပေါင်း ဒါဇင်နှင့်ချီပြီး အပတ်စဉ်ထွက်ရှိလျက်ရှိသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌါနမှ ထုတ်ပြန်သော စာရင်းအရ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်အမျိုးပေါင်း ၁၅၀ ၀န်းကျင်အထိရှိပြီး ပုံမှန်ထွက်ရှိနေသော သတင်းဂျာနယ်များမှာ အမျိုးအစား ၃၀ ၀န်းကျင်ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။
ထိုသို့ သတင်းဂျာနယ်များ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် သတင်းထောက်များ၊ သတင်းအယ်ဒီတာအရေအတွက်များ လည်းသိသိသာသာ များပြားလာခဲ့သည်။ ယခု ဖမ်းဆီးသည့် လုပ်ရပ်သည် အဆိုပါသတင်းမီဒီယာသမားများမှတဆင့် ပြည်ပရှိမြန်မာ သတင်းမီဒီယာများဆီ သို့ သတင်း မပေါက်စေရန် စစ်အစိုးရက သတိပေးခြိမ်းခြောက်မှု တရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။
ကေအန်ယူ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရာထူး ပထမဆုံးအကြိမ် ကရင်အမျိုးသမီးတဦးကို ခန့်အပ်
ဧရာဝတီ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ)၏ မကြာသေးခင်က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော (၁၄)ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်အစည်း အဝေးတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကေအန်ယူအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ အဖြစ် စောတာမလာဘောနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးးအဖြစ် နော်စီဖိုးရာစိန်ကို အောက်တိုဘာ လ ၁၇ ရက်နေ့က ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နော်စီဖိုးရာစိန်သည် ကေအန်ယူ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်ပိုင်း အတွင်းရေးမှူး တာဝန် ကို ထမ်းဆောင်ရသည့် ပထမဆုံးသော ကရင်အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ် သည်။
နော်စီဖိုးရာစိန်အား ကေအန်ယူတွင် ယင်းကဲ့သို့ ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းကို အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) က ကြိုဆို လိုက်သည်။
အမျိုးသမီးများအဖွဲချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) အတွင်းရေးမှူး နန်းယဉ်က“ကေအန်ယူရဲ့အခုဆောင်ရွက်မှုဟာ နိုင်ငံ ရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကို အသိအမှတ်ပြူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ၊ ကေအန်ယူရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက် မှာ ကရင်အမျိုး သမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လိုိ မျှော်လင့်ပါတယ် ”ဟု ပြောသည်။
နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့်အတူ ယခု ကေအန်ယူ ကွန်ဂရက်တွင် ရွေးချယ်ခံရသည့် အလုပ်အမှုဆောင်များမှာ စောဒေးဗစ် သာကပေါ်ကို ဒု ဥက္ကဌ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဗိုလ်မှူးစောလှငွေနှင့် စောဒေါလေမှူး တို့ကို တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁) နှင့်(၂) အဖြစ်လည်းကောင်း ခန့်အပ်လိုက်ပြီး တခြားသော အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များ အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ် မူတူး စေးဖိုး၊ စောဒေးဗစ်ထော၊ စောရောဂျာခင်၊ ပဒိုအားတိုး၊ ပဒိုဟေးဆာ၊ စောလားစေး တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ ကြသည်။
နော်စီဖိုးရာစိန်သည် မြန်မာစစ်အစိုးရက ကရင်တိုင်းရင်းသားများအပေါ် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ အပေါ် တွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်နေသော အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့ အစည်းတွင်လည်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် သူမ၏လုပ်ရပ်အတွက် နော်စီဖိုးရာစိန်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် (Perdita Huston Human Rights Award) ဆုကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းကလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဗဲငြိမ်းချမ်းရေးဆုအတွက် နော်စီဖိုးရာစိန်ကို အဆို တင်သွင်း ခဲ့သေးသည်။
ကေအန်ယူအဖွဲ့အနေဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ ဥက္ကဌ(ရ)ဦးရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ကေအန်ယူသည် အင်အားကြီးမားသည့် တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ၁၉၄၇ခုနှစ် ဖေဖော် ၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ထိုအချိန်က ဥက္ကဌမှာ စောစံဖိုးသင်ဖြစ်သည်။
၁၉၄၉ခုနှစ် မှ စတင်ကာ လက်ရှိ်အချိန်အထိ ကေအန်ယူသည် မြန်မာအစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန် ပုန်ကန်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရအား နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်သည်အထိ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လဲလှယ်ခဲ့ခြင်းမရှိချေ။
၁၉၉၅ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင်မူ တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ)သည် ကေအန်ယူ အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်လည်း ကေအန်ယူ ဥက္ကဌ စောဘိုမြသည် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်ခဲ့သေးသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ကေအန်ယူမှ ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်သည် တပ်သား ၃၀၀ ခန့်နှင့်အတူ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ၇ မှခွဲထွက်ကာ မြန်မာအစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့ပြီး ခွဲထွက်အဖွဲ့ကိုကေအန်ယူ/ ကေအန်လယ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစတင်၍ ကေအန်ယူအဖွဲ့က စစ်အစိုးရနှင့် အဆက်အသွယ်ကိုရပ်ဆိုင်း လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကေအန်ယူမှ ခွဲထွက်သည့်အဖွဲ့များပြားလာပြီးနောက်ပိုင်း အဖွဲ့အတွင်းတွင် လုပ်ကြံမှုများ ပိုမိုများ ပြားလာကာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာသည်လည်း ၂၀၀ဂ ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့က နေအိမ် ၌ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် လုပ်ကြံခံရမှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
မန်မာစစ်အစိုးရက ၂၀၀၆ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကေအန်ယူအား ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ကရင်ရွာသား ၃၀၀၀၀ ခန့် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရသည်။
မဟာချိုင်တွင် မြန်မာမိန်းကလေးများ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်စခွန် ခရိုင် မဟာချိုင်တွင် နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသား မိန်းကလေး အများ စုသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမားအခွင့် အရေး ဆောင်ရွက် နေသူများက ပြောသည်။
မဟာချိုင်အခြေစိုက် ထိုင်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့(Raks Thai)မှ ရှေ့နေ တဦးက ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ ပထမ ၈ လ အတွင်း၌ပင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမများ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့်အမှုပေါင်း ၃၀ ခန့် ရှိကြောင်း ပြောဆို သည်။
အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှု ၆ မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေသည်ဟု တခြားသော မဟာချိုင် အခြေစိုက် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့(Labor Rights Promotion Network-LPN)က လည်း ပြောသည်။
LPN အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဆွန်ဖွန် စခ၀ီ က “အဲဒီ မှာရှိတဲ့ လမ်းသရဲဂိုဏ်းသားတွေက မြန်မာအလုပ်သမတွေကို သားကောင် တွေလို ပစ်မှတ်ထားနေကြတာ ၊ တရားမ၀င် အလုပ်သမားတွေ၊ အဓမ္မပြုကျင့်ရင် သူတို့ကို ဖမ်းလို့ မရဘူးဆိုပြီး သူတို့က ပြောသေးတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
ယင်း လမ်းသရဲ ဂိုဏ်းသားများက မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အမျိုးသားများကိုလည်း ရိုက်နှက် လုယူမှုများ ရှိသည် ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ထိုင်းကို အရေးယူတာနဲ့ မြန်မာကိုအရေးယူတာကလည်း ကွာခြားမှုရှိတယ်၊ မြန်မာဆိုရင် အမှုကို တရားရုံးက အချိန်ဆွဲ ထားတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရင် တရားမျှတမှုမရနိုင်ဘူး”ဟု အထက်ပါ Raks Thai အဖွဲ့ရှေ့နေက ပြောသည်။
လမ်းသရဲ ဂိုဏ်းသားများက ညဘက် အလုပ်မှ ပြန်လာသော မိန်းကလေးများကို ကားဖြင့်ခေါ်ဆောင်ကာ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခြင်း ကို အများဆုံးကျူးလွန်တတ်ကြပြီး မိန်းကလေးများနေထိုင်ရာ အခန်းများသို့ ၀င်ရောက်၍ ပြန်ပေးဆွဲ ခေါ်ဆောင်သွားကာ အဓမ္မပြုကျင့်သည့် အမှုများလည်း ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့မှ မဟာချိုင်သို့ လာရောက်ပြီး စက်ရုံတရုံတွင်အလုပ်လုပ်နေသော ဟွန်ဆန်ကလည်း ၎င်းနှင့် ရင်းနှီး သည့် အသက် ၁၄ ခန့် မိန်ကလေး တဦးကို အဆိုပါ လမ်းသရဲ ဂိုဏ်းသားများက ဖြားယောင်းခေါ်ယူ၍ ရိုက်နှက်ပြီး အဓမ္မပြုကျင့်မှုရှိခဲ့ကြောင်း ပြန်လည် ပြောပြသည်။
တချို့သော အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့် မိန်းကလေးများမှာ ရှက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခံ ရမည်ကို ကြောက်ရွံ့၍ သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားပြောဆိုခြင်းမရှိကြဟု Raks Thai အဖွဲ့ ရှေ့နေက ပြောသည်။
ယင်း မဟာချိုင် ဒေသတွင် မြန်မာရွှေပြောင်း အလုပ်သမားအများစုသည် ပင်လယ်စာ လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ကြရပြီး ၎င်းတို့အတွက် လုံခြုံရေးအလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား သန်းနှင့်ချီ၍ ရောက်ရှိနေပြီး ၁ သန်းခန့်သာ မှတ်ပုံတင် စာရင်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရဲနည် အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈
ဆင်ဆာကြောင့် ဟာသမဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေမှု ရပ်ဆိုင်း
တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 20 2008 18:05 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ စာပေစိစစ်ရေးဌာနက ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြတ်တောက်လိုက်သဖြင့် လစဉ်ထုတ် ဟာသမဂ္ဂဇင်းတခု အောက်တိုဘာတွင် အချိန်မှီ မဖြန့်ချီနိုင်တော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရသည်။
ရန်ကုန် အခြေစိုက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မဂ္ဂဇင်းမှ ဖောင်အရေအတွက်ပေါင်း ၂၆ ဖောင်အနက် ၆ ဖောင်အား ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်ရေးမှ ဖြုတ်ချလိုက်သဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှု ရပ်ဆိုင်းရခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဖြုတ်တာများတော့ စာအုပ်ထုတ်ဖို့ မဖြစ်လောက်ဘူး။ ကဗျာနဲ့ ဝတ္ထုတွေ အဖြုတ်များတယ်။ ဒါကြောင့် ၂ လလောက် ရပ်ထားရမယ့် သဘော ရှိနေတယ်" ဟု မဂ္ဂဇင်းတိုက်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တော့ ထပ်မံ အရေးယူမှု ပြုမှာစိုး၍ သတင်းထုတ်ပြန်ရန် ငြင်းဆန်လိုက်သည်။
စာပေကင်ပေတိုင်ဟု ဂျပန်ခောတ် ဂျပန် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများ ရက်စက်မှုနှင့် တင်စားခြင်းခံရသော စာပေစိစစ်ရေးမှ မဂ္ဂဇင်းတိုက်အား တစုံတရာ အကြောင်းပြချက် မပေးသော်လည်း အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ကဗျာအဓိပ္ပာယ် နားမလည်သည့်အတွက် မူဝါဒနှင့် မညီဟု အကြောင်းပြကာ ဖြုတ်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း မီဒီယာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်။
"ကဗျာတွေဆိုတာက လျှို့ဝှက် ရေးသားရတာ များတယ်။ အဲဒါ အာဏာပိုင်တွေက အဓိပ္ပာယ် ကောင်းကောင်း နားမလည်ဘူး။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဖြုတ်ချင်ရင် ဖြုတ်လိုက်တာပဲ။ လျှောက်ဖြုတ်ချနေတာလေ။" ဟု ဝါရင့်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
အလားတူပင် ယခုလထုတ် ကလျာ၊ ချယ်ရီ၊ မြန်မာသစ်၊ မဟေသီ စသည့် ရသစုံ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ထည့်သုံးမည့် ကဗျာများ ဆင်ဆာ အဖြတ်ခံရသည့်အတွက် စာအုပ်ထုတ်ဝေရာတွင် ကဗျာ အပုဒ်ရေ နည်းသွားသည်။
"ကဗျာတွေက တော်တော် အဖြတ်ခံရတာ ဆိုးတယ်။ ဒီလဆို ကလျာမဂ္ဂဇင်းကဆို ၄ ပုဒ်ပဲ ထုတ်နိုင်တယ်။ မဟေသီက ၁၁ ပုဒ်တင်တာ ၅ ပုဒ်ပဲ ရတယ်။ မြန်မာသစ်က ၂ ပုဒ်ပဲ ထုတ်နိုင်တယ်။ အရင်ကဆို ရသစုံ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ အနဲဆုံး ၇ ပုဒ်တော့ ပါခဲ့တာပဲ" ဟု ရသစုံ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တခုမှ စာရေးသူတဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လကလည်း ချယ်ရီ မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ကဗျာဆရာ ခင်မောင်သန်း ရေးသားသည့် “ဒီပရင်္ဂ” ကဗျာကြောင့် မဂ္ဂဇင်းတိုက်အား အာဏာပိုင်များက ဖိအားပေးခဲ့သဖြင့် အယ်ဒီတာ ဦးဌေးအောင်သည် အလုပ်မှ ထွက်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း မဂ္ဂဇင်းများတွင် ထည့်သုံးသည့် ကဗျာများအား သေချာစိစစ်လာကြောင်း ရန်ကုန် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောဆိုကြသည်။
"အခုလို ဖြတ်တာများတော့။ စာအုပ်အင်္ဂါရပ် မမီတော့ဘူးပေါ့၊ ဖြတ်တာများရင်။ ဈေးကွက်ပါ ပျက်လာတယ်။ ဈေးကွက်က တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းလာနေတယ်" ဟု ဝါရင့် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတဦးက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
တရားစီရင်မှုကို မယုံ၍ ရှေ့နေပါဝါများ ရုပ်သိမ်း
တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 20 2008 18:24 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံနေရသူ ၄ ဦးက တရားစီရင်မှုများကို အယုံအကြည် မရှိသဖြင့် သူတို့ ရှေ့နေများ၏ ရှေ့နေ ပါဝါများကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
လှိုင်မြို့နယ်မှ ကိုထွန်းထွန်းဦး၊ မထားထားသက်၊ ကိုအောင်ကျော်မိုး၊ ကိုမောင်မောင်လတ်တို့ ၄ ဦးသည် ယနေ့တွင် လှိုင်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားစီရင်မှု၌ အယုံအကြည် မရှိသဖြင့် ရှေ့နေများအား ယခုလို ပါဝါ ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"သူတို့အပေါ်မှာ စွဲဆိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ တရားလိုတွေက မမှန်မကန် စွပ်စွဲနေတဲ့ အနေအထားတွေပေါ့နော်။ ဒီတရားစီရင်ရေးကို မယုံကြည်တဲ့အတွက် ရှေ့နေများ ပါဝါကိုလည်း ရုပ်ပါတယ်တဲ့။ တရားရုံးထုတ်တဲ့အခါ ပြောတယ်။ အမှုကို ဆက်လက်ပြီးတော့ စစ်ဆေး၊ မေးမြန်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မလုပ်တော့ဘူး။ အစစ်မခံတော့ဘူး။ အန်ကယ်တို့လည်း ပါဝါရုပ်ကြောင်း ရုံးတော်ကို တင်ပြပြီးတော့ ထွက်လာခဲ့တယ်'' ဟု ဗဟိုတရားရုံး ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။
အလားတူ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုအောင်ဇော်ဦး၊ ကိုကျော်စိုး၊ ကိုမောင်ကံတို့သည်လည်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ် သောကြာနေ့က သူတို့၏ ရှေ့နေအား ပါဝါ ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရွှေသံစဉ်တီးဝိုင်းမှ ဂစ်တာသမား ကိုဝင်းမော်၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများဖြစ်သည့် ကိုပြည့်ဖြိုးလှိုင် အပါအ၀င် ၉ ဦး၊ ကိုအောင်သွင်၊ ကိုမြစံ၊ ကိုတင်စမ်း၊ ကိုအောင်မြင့်နှင့် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ကိုအောင်သိန်းလွင်လည်း ရှေ့နေပါဝါ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်ဟု သူတို့ရှေ့နေက ပြောသည်။
တရားရုံးများတွင် တရားစီရင်မှုအား အယုံအကြည် မရှိခြင်းအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အကျဉ်းသားများအား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) – AAPP မှ အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က "တရားရုံးကို အယုံအကြည် မရှိတဲ့အခါ လိုက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေတွေရော၊ တရားလိုတွေရော အယုံအကြည် မရှိတာက ဖြစ်လာတာ။ နအဖ ကတော့ သူတို့ ချမယ်ဆိုတဲ့ စီမံချက်အတိုင်း ချမှာဖြစ်တယ်။ ရှေ့နေငှားခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ဘက်က ခုခံပိုင်ခွင့်နဲ့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဖြစ်တယ်လေ။ ရှေ့နေတွေကို ပါဝါရုပ်သိမ်းဖို့ ပြောတဲ့ အမှုသည်တွေကိုလည်း ပြန်ပြီး စဉ်းစားသင့်တယ်" ဟု ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး "ရှေ့နေတွေက ထောင်မကျအောင် လုပ်ပေးနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားနဲ့ ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုတော့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တချိန်ကျရင် အသုံးဝင်တာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ဒီစွပ်စွဲခံရတဲ့ လူတွေကို ဥပဒေရေးရာ ရှေ့နေတွေကနေပြီးတော့ ပြန်လည် ချေပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက သူတို့ ဘယ်လောက်ပဲ ထောင်ချခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ တချိန်ချိန်ကျရင် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာပါ" ပြောသည်။
ပြစ်မှု ကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၀ နှင့် အကျဉ်းထောင်များ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀ များအရ ရှေ့နေနှင့် ထုချေခွင့်၊ တွေ့ခွင့်များကို နအဖ က ပေးထားသော်လည်း ဥပဒေ လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိလျက်နှင့် ပါဝါ ရုပ်သိမ်းခံရခြင်းသည် အမှုသည်များ၏ အခွင့်အရေးများကို နစ်နာသည်ဟု ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက ပြောသည်။
သူက "ဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်ချင်တယ်။ အမှန်တရားလည်း ပေါ်ပေါက်ချင်တယ်။ တကယ့်ကို အမျိုးသား နိုင်ငံရေးမှာ ရပ်တည်ချက်တွေအတိုင်း တရားဥပဒေကို ရင်ဆိုင်ချင်တဲ့ စိတ်က ၈၈ ကျောင်းသားများ၊ အရှင် ဂန္ဘီရ၊ သံဃာတွေရော အားလုံးမှာ ရှိတဲ့ တပြေးညီ ဆန္ဒပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးကို လူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဥပဒေ စောင့်ထိန်းပေးမယ့် ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကို လိုချင်ကြတယ်။ ဒါတွေ ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရှေ့နေတွေကို ပါဝါရုပ်စရာ အကြောင်း မရှိဘူး" ဟု ပြောသည်။
အာဟာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအား မည်သည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်ဆိုသည်ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားသဖြင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဥပဒေများ မကိုက်ညီခြင်း၊ ဥပဒေဘောင် အပြင်ဘက်က ပြုလုပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်သဖြင့် ဥပဒေကို အလွဲသုံးစား လုပ်နေခြင်း၊ ဥပဒေကို မထီမဲ့မြင် လုပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ကိုတိတ်နိုင်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်များ ရွေးချယ်
တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 20 2008 14:17 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအတွင်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ခန့်အပ်ရွေးချယ်မှု မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် နှစ် ၆၀ ကြာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲနေသည့် ကေအန်ယူ ခေါ် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ ၁၄ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်အနီးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ခေါင်းဆောင်သစ်များ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဥက္ကဌအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ် စောတာမလာဘော၊ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ပဒိုဒေးဗစ်သာကပေါ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) ပဒိုစောလှငွေ၊ အတွင်းရေးမှူး (၂) စောဒါလေးမှူးတို့ကို တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်ဟု စကော ကရင်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် ကွဲကလူလ် သတင်းဌာနအဆိုအရ သိရသည်။
ကေအန်ယူ ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ၊ ဗိုလ်ချုပ် စောတာမလာဘောသည် (၇) ဦးမြောက် ဥက္ကဌ ဖြစ်သည်။ ယခင် ဥက္ကဌဖြစ်သူ စောဘသင်စိန်သည် မေ ၂၂ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် စောတာမလာဘောသည် ယာယီဥက္ကဌအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်၊
အစည်းအဝေးသို့ ကရင် အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကရင်မျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ကေအန်အယ်လ်အေ) တပ်မဟာ (၇) ခုမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ခရိုင်အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်မှာ စနေ တနင်္ဂနွေ ဗုံး (၂) လုံးပေါက်ကွဲ၊ လူ (၁) ဦးသေ
NEJ / ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် လူနေရပ်ကွက်အတွင်း၌ ယမန်နေ့ ညနေ (၅) နာရီခွဲခန့်က ဗုံး (၁) လုံး ပေါက် ကွဲပြီး လူ (၁) ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် တာဝန်ကျရဲအရာရှိတဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ရွှေပြည်သာမြို့ နယ် (၁၈) ရပ်ကွက် ရေပြာလမ်းသွယ် အိမ်အမှတ် ၂၉၈ (က) အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အိမ်ရှင် အဘ ဦးမြအုန်း၏ သား အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် ကတုံး (ခ) သက်ဦးဝင်း ဗိုက်ပေါက် သေဆုံးသွားသည်ဟု ရဲကပြောသည်။
အဆိုပါအိမ်၌ သားအဖ (၂) ဦးသာ နေထိုင်ပြီး ဖခင် တရားစခန်းသွားနေစဉ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အိမ်ရှေ့အဖီ အမိုးသွပ်များပါ ပွင့်ထွက်သွားကြောင်းနှင့် ထိုအိမ်၌ပင် နောက်ထပ်ဗုံး (၃) လုံး ကို အာဏာပိုင်များက ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ဒု-ရဲအုပ်တဦးက “ဒီလိုပေါက်ကွဲမှုဟာ အိမ်ထဲမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ရော၊ နောက် ထပ်ဗုံးတွေတွေ့တဲ့အတွက်ရော ဒီလူဟာ ဖောက်ခွဲရေးသမားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းစုံကိုတော့ စုံစမ်းနေဆဲပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
အလားတူ စနေနေ့ ည (၇) နာရီ မိနစ် (၅၀) ခန့် ကလည်း ရန်ကင်းမြို့နယ် ဘောက်ထော်ရှိ တပ်မတော်မှတ် တမ်းရုံးရှေ့ ဘောလုံးကွင်းအတွင်း၌ ဗုံး (၁) လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိကြောင်း ရန်ကင်းမြို့ နယ် ကြံ့ဖွံ့ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။ ထိုနေရာ၌ပင် နောက်ထပ်ဗုံး (၁) လုံးကိုတွေ့ရှိပြီး မပေါက်ကွဲမီ တားမြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့၌ အသေးစားဗုံးပေါက်ကွဲမှုများနှင့် မတော်တဆပေါက်ကွဲမှုများ မကြာ ခဏဆိုသလို ဖြစ်ပွားနေပြီး သေဆုံးဒဏ်ရာရှိမှုများလည်းဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်း၌ တိုက်ကြီး-ရန်ကုန် ပြေးဆွဲသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ် ဂတ်စ်အိုးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး လူ (၇) သေဆုံးရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လ (၂၅) ရက်လည်း ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခမ်းမအနီး မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံရှေ့ ကား မှတ်တိုင်၌ ဗုံးတလုံးပေါက်ကွဲပြီး လူတချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
ဗုံးကွဲမှုအများအပြားအနက် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရွှေပြည်သာကြံ့ဖွံ့ရုံးပေါက်ကွဲမှုကိုသာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များ၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု စစ်အစိုးရက စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အခြားဗုံးပေါက်ကွဲမှု အများစုမှာ တရားခံကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ အကြမ်းဖက်သမားများ၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုသာ စစ် အစိုးရက စွပ်စွဲလေ့ရှိသည်။
ကေအန်ယူ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် နော်စီဖိုးရာစိန် အရွေးခံရ
NEJ/ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈ နှစ် (၆၀) သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) အဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနေရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမျိုးသမီးတဦးအား မကြာခင်က ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့သည့် ကရင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သည်။
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးကဏ္ဍများကို အဓိကတာဝန်ယူရသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် နော်စီဖိုးရာစိန်အား ရွှေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မယ်တော်ဆေးခန်းတာဝန်ခံ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်က “ ဒီ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်မှာ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့ ယုံကြည်မှုအရ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေးသာမကဘဲ မြန်မာ့အရေးကိုပါ ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ် ယုံကြည်လို့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရတာ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ မှန်ကန်တဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ ပြတ်သားတဲ့မူဝါဒအပေါ်မှာ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူ နော်စီဖိုးရာစိန်သည် လက်ရှိ ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအ ရုံး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမူးလည်း ဖြစ်သည်။ ယခင်က ကရင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေတွင် ကျောင်းဆရာမတဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ကေဒဗလျူအို) အဖွဲ့တွင် ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူလာခဲ့သည်မှာ (၈) နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးဖြစ်သည်။
ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်၏ ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည့် The United Nations Association of the National Capital Area (UNANCA) အဖွဲ့မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် ပါဒီတာဟူစ်တန် လူ့အခွင့်အရေးဆုကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ အဆိုပါလူ့အခွင့်ရေးဆုမှာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားခဲ့သူ အမေရိကန်စာရေးဆရာမ ပါဒီတာဟူစ်တန်ကို ဂုဏ်ပြုသည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် UNANCA အဖွဲ့မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ပေးအပ်လာခဲ့ပြီး (၅) ကြိမ်မြောက်တွင် နော်စီဖိုးရာစိန် ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
20 October 2008ဦးသားညွန့်ဦး
စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံက အခက်ကြုံနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဏ်တွေကို ကူညီဖို့
လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ အာရှဈေးကွက်မှာ စတော့ခ်ဈေးတွေ သိသိသာသာ
ဟောင်ကောင် ဟန်ဆန်း (Hang Seng) နဲ့သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ အဓိကအညွှန်းတို့ ၄%
လောက် တက်သွားသလိုပဲ တိုကျိုရဲ့ နစ်ကေး(Nikkei) လည်း ၃% ခွဲ တက်သွားပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်း ကော့စ်ပီ (Kospi)၂% တက်လာလို့ လေးရက်တာ အရောင်းအ၀ယ်
ကာလအတွင်း အမြင့်ဆုံးတက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပဈေးကွက်မှာတော့ မနက်ပိုင်းမှာ
တင် ၂% တက်နေပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဘဏ်တွေရဲ့ နိုင်ငံခြားအကြွေးငွေ ဘီလီယံ ၁၀၀ ဖိုး အာမခံမယ်၊
ဘဏ်တွေကိုလည်း ဒေါ်လာဘီလီယံ ၃၀ တိုက်ရိုက်ထည့်ဝင်သွားမယ်လို့
နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာလည်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘဏ် ၂၀ ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ING ကို ဒေါ်လာ
၁၃ ဘီလီယံ ထည့်ဝင်မယ်လို့ အစိုးရက မနေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ချည်ထည် အ၀တ်ထည်တင်သွင်းတဲ့ ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံက မတင်သွင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တဦး ထောင် ၃ လ ချမှတ်ခံရ
မင်းဆက်ခိုင်(နိရဉ္စရာ) အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ရန်ကုန်တိုင်း သာကေတမြို့နယ် ရုံးတာဝန်ခံ ဦးစိုးမြင့်ကို အမြင်ကပ်ပုဒ်မဖြင့် သာကေတတရားရုံးက ထောင်ဒဏ်သုံးလ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိ်သည်။
ဦးစိုးမြင့်ကို ပုဒ်မ ၂၁၆ တရားခံပြေးလက်ခံမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုပြီး သာကေတမြို့ တရားရုံးက လွန်ခဲ့သော ကြသပတေးနေ့က ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သာကေတမြို့ တရားရုံးနှင့် နီးစပ်သူတဦးက “ဦးစိုးမြင့်ကို ထောင်ဒဏ် ၃လချမှတ်တာက သူ့သား တရားခံပြေးကို လက်ခံထားမှုနဲ့လို့ သိရပါတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ဦးစိုးမြင့်၏သားမှာ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့်က ရပ်ကွက်အတွင်း ရန်ဖြစ်မှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် ရပ်ကွက်ရှိလူများက အာဏာပိုင်များကို တိုင်းကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်းများက အစုံတရာ အရေးယူခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ထားခဲ့သည်။
သုံးနှစ်ကြာပြီးမှ ဦးစိုးမြင့်အား သားဖြစ်သူတရားခံအား လက်ခံထားသည်ဟု ဆိုကာ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်း သာကေတတရားရုံးက အမြင်ကပ်ပုဒ်မဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၃ လ ချမှတ်လိုက်သည်။
အလားတူ ဦးစိုးမြင့်ကို တရားချမှတ်သည့် ကြသပတေးနေ့က ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဖြစ်သော မခင်မိုးအေးနှင့် ကိုကျော်စိုးတို့ကိုလည်း နိုင်ငံခြားငွေလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနှင့် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဖမ်းဆီးမှုကြောင့် ရခိုင်ရိုးမတွင် ဆင်ကောင်ရေ အရေအတွက် လျော့နည်းလာ တောဆင်ရိုင်းများကို ဗီဒီယိုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်မည်
ရခိုင်ရိုးမနှင့် ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းကြီးနှင့် ဆက်စပ်နေသော မေယူတောင်တန်းတွင် ဆင်ဖမ်းသမားနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၏ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဖမ်ဆီးမှုကြောင့် တောဆင်ရိုင်းအရေအတွက်မှာ တနှစ်ထက်တနှစ် လျော့နည်းလာကြောင်း သိရသည်။
သို့အတွက် အဆိုပါဆင်ရိုင်းများကို ဗီဒီယိုဖြင့် ရိုက်ကူးပြီင်္း မှတ်တမ်းတင်မှုများ ပြုလုပ်သွားရန် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တခုက စီစဉ်နေကြောင်း အမည် မဖေါ်လိုသူတဦးက ပြောသည်။
“မှတ်တမ်းတင်မယ့် အဖွဲ့က ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အဓိက မေယူတောင်တန်းမှာ ကျက်စားနေတဲ့ တောဆင်ရိုင်းတွေရဲ့ အရေအတွက်ကို ဗီဒီယိုနဲ့ မှတ်တမ်းတင်မှာဖြစ်သလို နေရာ ပြောင်းရွှေ့မှုရှိမရှိကို မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးသွားဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်။”ဟုပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆင်ရိုင်းများအား ဗီဒီယိုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် မေယူတောင်တန်း တလျောက်ရှိ ဆင်များကျက်စားရာ နေရာများဖြစ်သော အထက်နန်းရာ၊ အတွင်းပြင်၊ အင်းဒင်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အထက်ပိုင်းနှင့် ဘူးသီးတောင်-မောင်တော ကားလမ်းတလျောက်ရှိ နေရာများသို့ သွားရောက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်မည် ဖြစ်သည်။
“အခုက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဆင်တွေကို ဆင်ဖမ်းအဖွဲ့တွေက လိုက်ဖမ်းနေတဲ့အတွက် တချို့တောဆင်ရိုင်းတွေဟာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံတွင်းက စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ်မှာ ကျက်စားလာတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှတ်တမ်း တင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဆင်ခြေရာတွေ၊ ဆင်နေတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ဆင်ချေးတွေကိုပါ ဗီဒီယိုနဲ့ ရိုက်ကူးပြီး နေရာပြောင်းရွှေ့မှု ရှိမရှိကိုအသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်ပါလ်ိမ့်မယ်။”ဟုသူက ဆက်ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မေယူတောင်တန်းမှာ ဘင်္ဂလာပင်လယ်အော်ထဲသို့ ထိုးထွက်နေသော အငူတွင်တည်ရှိပြီး ဟိမ၀န္တာနှင့်ဆက်စပ်နေသဖြင့် တောဆင်ရိုင်းများ အလွန်ပေါများသော တောင်တန်းတခုဖြစ်ပြီး ဆောင်းရာသီတွင် ပင်လယ်လေကိုရှုရိူက်ရန် ဆင်များအုပ်စုလိုက် တောင်ဘက်ပိုင်းဒေသအထိ ဆင်းလာလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
၀န်ကြီးချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်က ဖမ်းဆီးရရှိမိခဲ့သော ဆင်ဖြူနှစ်ကောင်ကို အဆိုပါ တောင်တန်းမှပင် ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သည်။